ဒီတစ်ခါမှာတော့ DR Solution ကို ဘယ်လို Optimize ဖြစ်ဖြစ်သုံးမလဲ ဆိုတာကို ပြောပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Dater Center တစ်ခုထဲမှာ Data တွေ Application တွေကို ထားပြီး မောင်းနှင်လာတဲ့ အချိန်မှာ Primary DC ပျက်ခဲ့သည်ရှိသော် မိမိတို့ Application တွေ Downtime မရှိပဲ ဘယ်လို ဆက်လက် Run သွားမလဲ ဆိုတာက Organization တိုင်းရဲ့ Big Challenges တွေဖြစ်လာပါတယ်။
ဒါကြောင့် DR Solution (Disaster Recovery) လိုအပ်လာပါတယ်။ DR Solution (Disaster Recovery) ဘာလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ ရှေ့ Contents တွေမှာလဲ ဖော်ပြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ မှာတော့ DR Solution(Disaster Recovery) အကြောင်းကို အသေးစိတ် မဖော်ပြတော့ဘဲ Downtime အနည်းဆုံးနဲ့ Cost Saving ဖြစ်အောင် ဘယ်လို ဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ ဆိုတာကို အသားပေးပြီး ရေးသားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
DR Solution (Disaster Recovery) စတော့မယ်ဆိုရင် DC Infra, Resources, Configurations အစရှိသဖြင့် အတူတူ သုံးထားတဲ့ DR Infra တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် DR ကို DC နဲ့ အကွာအဝေးတစ်ခုရှိတဲ့ တခြားတစ်နေရာမှာ ဆောက်ထားကြတယ်။ DC နဲ့ DR Connection ရှိမယ်ဆိုရင် RPO RTO သတ်မှတ်ပြီး အကောင်းဆုံး Disaster Recovery ကို ဆောင်ရွက်လေ့ရှိကြတယ်။
ဒီနေရာမှာ Cloud ရဲ့ DR Solution ကို အသုံးချနိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး Cloud ရဲ့ DR Solution တွေကို ဘယ်လို အသုံးပြု မလဲ မပြောခင်မှာ Cloud DR နဲ့ On-Premise DR က ဘာတွေကွာလဲ? ဘာတွေ ပိုပြီး အကျိုးရှိလာမလဲ ဆိုတာကို လေ့လာကြည့်ပါမယ်။
➡ Cloud solution က On-Premise မှာလို DR ကြီး တစ်ခုလုံး ဆောက်စရာမလိုတဲ့ အတွက် Initial Cost Investment ကုန်ကျစရာ မရှိပါဘူး။
➡ On premise DR တည်ဆောက်မယ်ဆို Region အတွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်, Country အတွင်းမှာပဲ ဖြစ် ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Cloud Solution မှာတော့ နှစ်သက်ရာ Region Or Country ကိုရွေးချယ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒေသ တစ်ခုမှာ မီးလောင်တာဖြစ်ဖြစ် ငလျင်လှုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဆုံးရှုံးမှုက ကိုယ့် ရဲ့ DC ရော DR ကိုရော Effect မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
➡ Cloud Solution မှာက DR စ Run တဲ့ အချိန်ကြမှ Compute Cost တွေ စပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက် DR အတွက် သီးသန့် ကုန်စရာ မရှိနိုင်တော့ပါဘူး။
➡ Cloud Provider တွေက RPO နဲ့ RTO ကို ကောင်းဆုံး Provide လုပ်ပေးထားတဲ့ အတွက် Downtime နည်းတယ်။ End User က မသိလောက်အောင်ကို Downtime အနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ RPO ကို Zero အထိ ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
How to Build DR with Azure
ဒါဆိုရင် Cloud Solution ကို အသုံးပြုပြီး DR ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ❓
➡Cloud Solution အနေနဲ့ Private Cloud နဲ့Public Cloud ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Public Cloud မှာဆိုလဲ AWS Cloud ပဲသုံးသုံး Azure Cloud ပဲသုံးသုံး Solution ကတော့ အတူတူပါပဲ။
➡ ဒီ Content မှာတော့ Public Cloud ဖြစ်တဲ့ Azure နဲ့ ဘယ်လို DR တည်ဆောက်သွားမလဲ ဆိုတာကို ရှင်းပြသွားပါမယ်။
➡ ဘယ် Public Cloud ပဲ သုံးသုံး ပထမဆုံး Subscription တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။ Azure သုံးမယ်ဆိုလဲ Subscription တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။
➡ ထို့နောက် Configuration Server တစ်လုံးကို On-premise ရဲ့ Datacenter ထဲမှာ ထားရပါမယ်။ သူကတော့ အဓိက Main point ပါ။ ဒီ Configuration Server မှာ Azure နဲ့ ချိတ်ဆက်မှု လုပ်ထားရပါတယ်။ On-premise ထဲက Data တွေကိုယူ Cloud မှာ သွားပြီး Replicate လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Replicate လုပ်တဲ့ အချိန်မှာတော့ Azure Site Recovery (ASR) Service မှ အဓိက လုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
➡ On-premise ရဲ့ Data တွေကို Replicate လုပ်ပြီး cloud မှာ သိမ်းထားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Azure ဘက်မှာ Storage Account တစ်ခု လိုအပ်ပါတယ်။
➡ Azure Storage Account ထဲက VM တွေရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Data တွေက သက်ဆိုင်ရာ Disk အနေနဲ့ နေရာယူထားပြီး DC မှာ Disaster ဖြစ်တဲ့ အခါကျမှ DR ဘက်မှာ Failover ဖြစ်ပြီး VM အသွင်ပြောင်း၍ Run မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (ဒါကြောင့် Failover စမှ Compute Cost စ ပေးရမှာ ဖြစ်တယ်။)
➡ ထို့ကြောင့် Basic DR Configuration အတွက်ဆိုရင် လိုအပ်ချက်အနေနဲ့ Primary DR ဘက်မှာ Configuration Server တစ်လုံး၊ Azure Cloud ဘက်မှာ Storage Account တစ်ခု ပဲ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
➡ On-premise DC နဲ့ Azure Cloud DR ကို Disaster မဖြစ်ခင် Data Replication လုပ်တဲ အခါမှာ Real Time Synchronization လုပ်ပြီး Replicate လုပ်နေတဲ့ အတွက် RPO (Recovery Point Objective) က Zero ဖြစ်နေမှာပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ ပျက်သွားတဲ့ နောက်ဆုံးအချိန် အထိ Data က ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
➡ ဒါပေမယ့် Organization ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကြောင့် Firewall တို့ Load Balancer တို့ သုံးထားတာတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေကိုလဲ Azure ရဲ့ Market Place မှတစ်ဆင့် Configure လုပ်နိုင်ပါတယ်။
➡ Azure ရဲ့ VPN သုံးပြီးလည်း On-premise နဲ့ ဆက်သွယ်ရာမှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။
➡ Firewall သုံးတဲ့ Use Case မျိုးမှာဆိုရင် Azure Failover စ Run တဲ့ အချိန်မှာ Firewall တွေ ဖွင့်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ Admin က လိုက်ဖွင့်နေရမှာလားလို့ မေးခွန်းရှိနိုင်ပေမယ့် Auto Script ရေးပြီး Run လို့ရပါတယ်။ Implementation လုပ်မယ့် သူ၊ Design စဉ်းစားမယ့်technicians တွေရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု အတွေ့အကြုံရှိမှုတွေပေါ် မူတည်ပါတယ်။
➡ ယခု လက်ရှိ Trend ဖြစ်နေတဲ့ SD WAN Technology လိုမျိုးတွေနဲ့လည်း တွဲပြီး Integrate လုပ်ပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်။
➡ RTO ကတော့ VM မှာ Run ထားတဲ့ Application တွေမှာ သက်ဆိုင်ရာ Application Admin တွေအနေနဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ App Services တွေ ပြန် Run လာအောင်လုပ်ပေးနိုင်မှုပေါ် လဲမူတည်ပါမယ်။
➡ ထို့အပြင် Primary DC က Stable Stage ဖြစ်ပြီဆိုရင် Azure ကနေ On-premise ဆီကို Failback ပြန်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာလဲ Changes ဖြစ်တဲ့ Data တွေကို Primary DC ကို ပြန်ပို့နိုင်ဖို့ Process Server/Configuration Server ကနေ ဆောင်ရွက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ Azure ဘက်ကနေ Failback လုပ်ပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ Azure ပေါ်က VM တွေက Auto Shutdown ဖြစ်ပြီး Primary DC မှာပြန်သွား Run နေပါလိမ့်မယ်။
Summarized အနေနဲ့ ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် DR solution ကြီး စနိုင်ဖို့ နောက်ထပ် Data Center ကြီး တစ်လုံး ဆောက်တာ၊ Facilities တွေ အပြည့် ထားတာ၊ IT Resources တွေ ရင်းနှီးထားတာ၊နေရာတွေ ဆက်သွယ်မှုတွေ စဉ်းစားနေရတာ စတာတွေ မလိုတော့ဘဲ Cloud Services နှင့်အတူ ကျွမ်းကျင်သော Cloud Architects တွေရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ကို အသုံးချပြီး အလွယ်တကူ အမြန်ဆန်ဆုံးနဲ့ စျေးသက်သာစွာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
NEX4 အနေနဲ့ Customer တွေရဲ့ လက်ရှိ DC Environment က ဘယ်လိုရှိမလဲ? Customer ရဲ့ Organization Nature အရ DR Solution ကို On-premise မှာ ထားသင့်သလား? Cloud DR နဲ့ သွားသင့်သလား? ဘာတွေ လိုအပ်သလဲ? ဘယ် Solution ဆိုရင်တော့ အသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာတွေကို ပထမဆုံး Advice ပေးနိုင်ပါတယ်။ Customer ရဲ့ Requirement, Customer ရဲ့ Nature, NEX4 ရဲ့ Advices နဲ့ Future Services တွေကို အကောင်းဆုံး ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။